Vhidhiyo: Innovation Inogadziriswa nekugadzirisa Matambudziko | Martech Zone
Vhidhiyo: Innovation Inogoneswa nekugadzirisa Matambudziko
Mugovera, Kubvumbi 16, 2011 China, June 18, 2015 Douglas Karr
NeChishanu, ndakapihwa mukana unoshamisa wekutora chikamu muCompendium's Innovation Summit. Pasi pehutungamiriri hwaMutungamiri Frank Dale, aine zano kubva kuna Blake Matheny, uye nerutsigiro rwemuvambi Chris Baggott uye Sales VP Scott Blezcinski, kambani yakatora "nguva yekubuda" kubva mukushanda uye, pachinzvimbo ichi yakapa zuva kune hunyanzvi.
Chris akatanga kuita nenyaya inoshamisa yekuti akatadza sei mune rimwe bhizinesi, asi mushure mekuziva dambudziko, akavaka imwe kambani inoshamisa - ExactTarget.
Kiyi yenyaya yake ndeyekuti hunyanzvi hausi hwekugadzirwa kwechinhu chakaomarara kana kutonhorera ... Ndezvekuona dambudziko uye kushanda nesimba kuti uwane mhinduro. Mukati mezuva, zvikwata zvitatu mukati meCompendium zvakaona matambudziko matatu akasiyana vatengi vavo vaive:
Kugadzira zvemukati zviri nyore.
Kuvandudza mhando yezviri mukati.
Kuvandudza mwero wekushandurwa pane blog Inodaidzira Kuita.
Mapoka akabata vatengi vakakosha, vakakumbira rubatsiro rwavo, vakafunga mazano, uye vakatofanotaura kukanganisa kwebhizinesi. Ini handigone kugovera mhinduro - chete kuti yega yega ichave iri hombe mutambo chinja kune yavo indasitiri. Zvese muzuva rimwe!
Kambani yako inoshingairira kusimudzira hunyanzvi seizvi? Kana iwe ukaona kuti zuva nezuva kukuya kwebhizinesi rako kuri kukwevera kugadzirwa kwechikwata chako uye hunhu pasi - iyi inogona kungova mhinduro kwayo yekumutsiridza bhizinesi rako, vashandi vako, uye kugadzirisa matambudziko chaiwo pamusika. Pasina mubvunzo kuti ini ndichave ndichiisa izvi mukambani medu!
Kuzivisa: Ini ndiri mugovani muCompendium, ramba uchibatsira vatengi vavo, uye Blake akashanda pane mamwe anoshamisa ekushingairira mapurojekiti ne Highbridge.
Tags: blake mathenychris bagottkuenderanahunyanzvi musangano
Ongororo Yakareruka nechero Email Platform
Zvese Bhizinesi ndeMunharaunda